घरेलु छनोटलाई समर्थन गरिनुपर्छ - जर्नल "आलु प्रणाली"
в राज्य, विज्ञान, समाचार, प्रजनन र बीज उत्पादन
रूसी बीउ बजारमा आयात प्रतिस्थापनको समस्या, घरेलु प्रजनन र बीउ उत्पादनको विकासको बारेमा कृषि र खाद्य नीतिको महासंघ परिषद् समिति अन्तर्गत विशेषज्ञ परिषद्का सदस्यहरूले छलफल गरेका थिए, आधिकारिक रिपोर्टहरू। ब्रीडर्स र बीउ उत्पादकहरूको राष्ट्रिय संघको वेबसाइट.
कार्यक्रम भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत भएको थियो । कार्यक्रममा बीउ उत्पादक, कृषि व्यवसायका प्रमुख, जनसंघ, ​​उद्योग समुदाय, अनुसन्धान केन्द्र तथा संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
हाम्रो देशमा पश्चिमी प्रतिबन्धहरूको दबाबसँग सम्बन्धित वर्तमान परिस्थितिमा, कृषि उत्पादकहरूलाई वर्तमानको लागि मात्र नभई आगामी वर्षहरूको लागि पनि कृषि बालीको रूसी चयनको उच्च गुणस्तरको बीउहरू प्रदान गर्नु विशेष सान्दर्भिक छ। यस वर्ष स्वदेशी कृषि उत्पादकलाई पूर्ण बीउ उपलब्ध गराइएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
“हामीले प्रबन्धकीय निर्णयहरू गर्न आवश्यक छ, बीउमा 100% आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्न हर प्रयास गर्नुपर्छ। र यो छलफल अब व्यापार प्रतिनिधि, उद्योग संघ र वैज्ञानिकहरुको दृष्टिकोण सुन्न आवश्यक छ। यो बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ कि नयाँ प्रजातिहरू प्राप्त गर्न मात्र होइन, तर तिनीहरूलाई उत्पादनमा थप परिचय दिन के गर्न आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, विज्ञान आफ्नै दिशामा अघि बढिरहेको छ, व्यवसायले सधैं यी चयन उपलब्धिहरू प्रयोग गर्दैन, यसले विदेशी बीउहरू किन्छ। एक शब्दमा, हामीले सबै कमजोर पक्षहरू छलफल गरेर एकसाथ काम गर्न आवश्यक छ," समितिका अध्यक्षले बैठकका सहभागीहरूलाई सम्बोधन गरे। एलेक्सी मेयोरोभ.
यो नोट गरिएको थियो कि, एक नियम को रूप मा, धेरै बीउ फार्महरु लाई बिना साथ बिना बीउ बेच्छन्। तर अनुसन्धान र उत्पादन कृषि होल्डिंग "कुर्गनसेमेना" नयाँ प्रजातिहरूको खोजी, खेती र बिक्री मात्र होइन, तर नयाँ प्रजातिहरूको प्रजननमा पनि संलग्न छ, विविधता प्रविधिको विकास, जसले उच्च र स्थिर उपज प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। कृषि उत्पादकहरूसँग साझेदारी गर्न तयार छ।
कृषि होल्डिङका महानिर्देशक, नेशनल युनियन अफ ब्रीडर्स एण्ड सीड ग्रोअर्स माराट इस्लामोभको काउन्सिलका अध्यक्ष, धेरै वर्षदेखि समुदायलाई चिन्ता गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दामा ध्यान दिए - राज्य विविधता परीक्षणको कामको संगठन। प्रणाली र नयाँ प्रजातिहरू र हाइब्रिडहरूको स्वतन्त्र परीक्षण कायम राख्नु पर्ने आवश्यकता, जुन हाल संघीय बजेटबाट पुरानो कम फन्डिङको प्रभावमा छ - देशमा कृषि उद्यमहरूको स्तरसँग मेल खाँदैन र घरेलु सम्भाव्यताको विकास सुनिश्चित गर्दैन। किस्महरू र हाइब्रिडहरू।
बिन्दु यो हो कि प्रणालीको हालको मर्मतका लागि 1 बिलियन रूबल भन्दा कम छुट्याइएको छ। र यो आवश्यकता संग छ -3बिलियन भन्दा बढी, उपकरण र साना आकारका उपकरणहरू गणना गर्दैन। विशेषज्ञहरु को अनुसार, तिनीहरूको नवीकरण अर्को 15 अरब rubles आवश्यक हुनेछ। अपर्याप्त कोषले संगठनका कर्मचारीहरूमा हानिकारक प्रभाव पार्छ, साथै यस क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका परीक्षण प्लटहरूको संख्या 1 मा घटाउने निर्णयहरू। तसर्थ, जलवायु अवस्था, माटोको विविधता र राहतको विविधताको सम्बन्धमा विविधता परीक्षणमा जारी कार्यको नतिजालाई प्रश्नमा बोलाइएको छ। यसले अनिवार्य रूपमा ठूलो घाटा निम्त्याउनेछ।
NSSIS का सदस्यहरूले हालको मर्मतसम्भार र सामग्री र प्राविधिक आधार अद्यावधिक गर्न बजेट विनियोजनका लागि आवश्यक सबै आवश्यकताहरूलाई ध्यानमा राख्दै, राज्य परीक्षण प्रणाली कायम राख्ने मुद्दालाई विचार गर्न रूसी संघको सरकारलाई सिफारिस गर्न प्रस्ताव गरे।
उप कृषि तथा खाद्य नीति सम्बन्धी महासंघ परिषद् समितिका अध्यक्ष बेलन खाम्चीभले राज्य विविधता परीक्षणको कामलाई वास्तवमै समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताए। यदि यो गरिएन भने, सकारात्मक परिणाम पछ्याउँदैन।
स्रोत: बिरुवा प्रजनक र बीउ उत्पादकहरूको राष्ट्रिय संघ
टैग: आयात प्रतिस्थापनघरेलु बीउप्रजनन र बीउ उत्पादन
आलु र तरकारी उत्पादकहरूको ध्यान!
किसान डेनिस पाभ्लुकले कसरी लाखौं रूबल आलुको साथ टेस्ट ट्यूबमा उब्जाउन सकिन्छ भनेर भने